ဘ၀ ဆိုတာ သေဆုံးခြင်း | The FNG
July 29, 2012 · by 21 South News	· in ရသ ကဏ္ဍ.	·
သာသာယာယာပဲလျှောက်ဝင်သွားခဲ့တယ်။ ပိုက်ဆံ ရချင်ရင် ခရမ်းချဉ်သီးစိုက်ဖို့ သူအကြံပေးခဲ့တယ်
။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာမြေမှာ သီချင်းတွေလည်းထားခဲ့ပါတယ်။
ဘ၀ဟာ သေခြင်းတရားပဲလို့ ရွတ်ဆိုမှုရဲ့ အဆုံးသတ်မှာ ဘုရားကျောင်းတစ်ခုရှေ့ ခဏခဏရောက်တယ်။
အ၀တ်ဟောင်းတွေ…။ ထီး အဟောင်းတွေ…..။ ဘ၀ဟောင်းတွေ……။ ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့ခြင်းတွေ…။ အဆုံးသတ်ပေးပါ။
ဖိနပ်တစ်ရံထားခဲ့မယ်။ ဘ၀ဟာသေဆုံးပြီးရင် အသစ်ပဲဖြစ်သင့်တယ်။သုညပြီးရင် တစ်လို့အမေပြောဖူးတယ်။ ပြေးစရာမြေမရှိတော့ဘူး
လား။ နောက်ဆုံးတော့မင်းထားခဲ့မှာသိပါတယ်။ ၀ိုင်နီနီတွေမြိုချလိုက်တိုင်း ပူနွေးရှတသွားတာသိတယ်။ တစ်စုံတစ်ခုကို သိတယ်။
မူးယစ် ရီဝေခြင်းတွေနဲ့ အချိန်တွေကို ရပ်တန့်ပစ်လို့မရဘူး။ သံသရာဆိုတာရှိတယ်။
လူတိုင်းဟာလူအများရဲ့ လေးစားခွင့်ကို ခံထိုက်တယ်။ အမျိုးကောင်းသမီးတွေက အိပ်စရာအခက်အခဲရှိတယ်။
ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းဖို့ စာတွေ ဖတ်ရတယ်။ A,B,C ။ ဓါတ်ပုံရိုက်ရတယ်။ မူးရတယ်။ ရယ်ရတယ်။ ဒါဘ၀ပဲ…။
ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဟော်တယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အတူတူပဲ။ ငွေက ဒုတိယဘုရားသခင်ပဲ။ ပထမဘုရားသခင်မှ ရောက်မလာပဲ. ။
ငွေမရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ငွေရှိရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဘ၀ကဘ၀ပဲ။ ခဏခဏဆိုရင်တော့ မကောင်းဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်တာကို ကိုယ်ဆက်လုပ်။ သူများမကြိုက်တာမလုပ်ဖို့ လိုတယ်။ သူတော်စင်တွေကရော ဘာတွေလုပ်တတ်သလဲ။ မြင့်မြတ်စင်ကြယ်ခြင်းက အပြစ်အနာကင်းမဲ့သလား။ နောက်တစ်ယောက်မတွဲရဘူးလား။ မတွဲရတော့ဘူးလား။ ရင်နာစရာမရှိရင် နာကျင်စရာလည်းမရှိဘူးလား။ ကဲ… ပြီးပြီလား။ ဒါဘ၀လား။
ဘယ်ကိုသွားဦးမှာလဲ။ ဘာတွေလုပ်ဦးမှာလဲ။ ဘာတွေဖြစ်ဦးမှာလဲ။ မင်းအိပ်မပျော်ဘူးလား။ ရန်ကုန်မြစ် ကြီးရှိတာပဲ။ ၀ိုင်နီနီတွေရှိသားပဲ။
သီချင်းတွေလည်းရှိတယ်။ ဖိုးသားလည်းရှိတယ်။ ဘိုလေးလည်းရှိတယ်။ အမျိုးကောင်းသမီးတွေ ကို စောင့်ရှောက်ကြဖို့လိုတယ်။. အရောင်တွေကို ချုပ်မထားမိဖို့လိုတယ်။ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပမှာ ငါဘတ်ထရီမရှိတော့ဘူး။ အဆုံးမှာတော့ လူတိုင်းဟာ ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်တတ်သွားရမှာပဲလေ။
အနုပညာသမားဆို မြို့ဟောင်းကိုလည်း စွန့်ရဲတယ်။ မြို့သစ်ကိုလည်း တည်ရဲတယ်လို့ ဇာတ်ညွှန်းဆရာငြိမ်းမင်းက ပြောတယ်။ သတင်းထောက်တွေတစ်ဦးချင်းရဲ့ဘ၀တွေဟာ ကဗျာတွေဖြစ်ကြောင်းသတင်းဆရာ ဒေါက်ကော်စပါကပြောခဲ့တယ်။
သူမကတတ်တူးမဟုတ်ဘူး။ ခနာကိုယ်ပေါ်မှာ ထင်ဟပ်နေစရာမရှိဘူး။ အရုပ်ဆိုးဖျက်ဆီးပစ်စရာမလိုဘူး။ အသွေးအသားထဲမှာ ရှိတာ ပဲလိုတယ်။
လကုန်ရင် အဆောင်ပြောင်းရမယ်။ အ၀တ်တွေလွှင့်ပစ်ရမယ်။ သူမက အထုပ်တွေအများကြီသယ်တတ်တယ်။ လေးလံရင် လွှင့်ပစ်ရမယ်။
အဆောင်ဆိုတာ နေကောင်းတဲ့အရပ်တစ်ခုမှမဟုတ်တာ။ လွှင့်ပစ်လိုက်။ ဘ၀က အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလို ရှိသင့်တယ်။ Brand တွေနဲ့ပဲနေ။အလွယ်တကူဟောင်းနွမ်းမပစ်ဖို့လိုတယ်။ ကိုအောင်ဝေးက လွမ်းစရာကောင်းတယ်။ အမျိုးကောင်းသမီးတွေရဲ့ ဘ၀ လမ်းဟာ ခါးတယ်။
နားရွက်ကားကားတွေနဲ့ ကမ္ဘာမြေကို နားစွင့်တတ်ဖို့လိုတယ်။ သားငယ်လေးက စကားတတ်တယ်။
အိပ်စရာမရှိရင်မအိပ်ပဲနေ။ ဗျိုင်းတွေကတော့ မကျည်းပင်အိုဟောင်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေတယ။် သူတို့သိပ်ဖြူစင်ကြတယ်။ သားငယ်လေး
အိမ်အ၀င်ဖိနပ်ချွတ်မှာ မကိုက်တတ်တဲ့ ခွေးနှစ်ကောင်ရှိတယ်။ အိမ်အကူမိန်းမကြီးက ဟန်ပန်ကြီးနေတယ်။ ထောင်ဆိုတာ နံရံမခြားတဲ့
သံဆူးကြိုးတွေရဲ့ နေရာဖြစ်မှန်း နံနက်ခင်းမှာ မြင်ရတာ အံ့သြစရာကောင်းတယ်။
အသံနီနီတွေကို တစ်မြို့လုံး ကိုင်ဆောင်ထားကြရမယ်။ သမ္မတကြီးရဲ့မျက်ဝန်းတွေက ကြင်နာသနားတတ်တယ်။ ငါတို့ခေတ်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်
မှုဆိုရင်တော့ ဒါဟာ သမိုင်းပဲဖြစ်တယ်။
သတင်းထောက်တွေရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကို ငါတို့လိုလားတယ်။ သူတို့ အသဲကွဲနေလား။ သတင်းလိုက်ဖို့ ခရီးစရိတ်မရှိဘူးလား။
ပလက်ကျွတ်နေလား။ ၀ိုင်မူးနေလား။ ကလပ်သွားဖို့ လိုသလား။ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်မယိမ်းယိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်။ပျော်ရွှင်ရေးလိုတယ်။သတိရ
လိုက်တာ ။ လွမ်းလိုက်တာ။ သူမမှာ ပြောစရာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အစ်မပြန်ရမယ်တဲ့။ ကောင်းကင်ကပြာနေတယ်။ ကျင့်ဝတ်ဆိုတာ
လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်။ မေတ္တာတရားက ဒေါသထွက်နေတယ်။ ဖုန်းဆက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ကျောခိုင်းတတ်ဖို့အလေ့အကျင့်
လိုတယ်။ ငွေရှာဖို့ငွေရှာတတ်ရမယ်။ လူတိုင်းကရိုးသားဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ခံစားချက်ကို အမှန်အတိုင်းဖွင့်ဟဖို့လိုတယ်။ခေါင်းမှန်မှန်လျှော်
ဖို့လိုတယ်။ ဆံပင်စိုတွေ မင်းကြောင့်ဖျားလိမ့်မယ်။
မောင်ရှိပေးလေ..။ အနားမှာမောင်ရှိပေးလေ..။ မသေချာဘူး။မသေချာဘူး။ ဘ၀မှာ ဘယ်အရာမှ မသေချာဘူး။ ကောင်မလေးက ဖြူ
ဖက်ဖြူေ၇ာ်ဖြစ်နေပြီ။ သူအသားတွေခြောက်နေပြီ။ တစ်စုံတစ်ခုကို သူလိုအပ်တယ။် အသဲကွဲတယ်ဆိုတာ ထပ်တလဲလဲတော့မကောင်း
ဘူး။ အေးချမ်းခြင်းဆောက်တည်ရာဘယ်မှာလဲ။ မေတ္တာတရားဘယ်မှာလဲ။
သူက မျောက်တစ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့ရင် အလေးပြုဖို့လိုမလား။ သူက အများအတွက် သူရဲကောင်းပဲဖြစ်တယ်။ ဟန်ဆောင်ခြင်းကို မုန်းတယ်။
လောကကို သရော်တယ်။ အိနြေ္ဒကြီးကြီးနဲ့ လက်တုန့်ပြန်တတ်တယ်။ သူ့လက်သည်းတွေရှည်တယ်။ မုန့်တွေဝယ်သွားဖို့ လိုတယ်။
လိုအပ်ရင်သူအကုန်လုပ်လိမ့်မယ်။ လူတွေက လိမ်ညာတယ်။ သူက ရွှေဘဖြစ်တယ်။ မျောက်တစ်ကောင်ဖြစ်တယ်။ လိုအပ် ရင်ဖုန်းပိတ်ထားရမယ်။ အစာအိမ်ရောင်ရမယ်။ သတင်းထောက်တွေမှာ အစာအိမ်ရောဂါရှိတယ်။ ဒါ .. ဂရုစိုက်သင့်တယ်။ မြို့ပြင်မှာ လယ်ယာမြေတွေရှိတယ်။
လယ်သမားတွေရှိတယ်။ ဘ၀တွေရှိတယ်။ ဒါ.. ဂရုစိုက်ရမယ်။ ရေတံခွန်နဲ့ မေတ္တာတရားလည်းရှိတယ်။ သူတို့သီချင်းဆိုကြတယ်။
အဖေကြီးက အမေကြီးကိုချစ်တယ်။ အမေကြီးနဲ့သမီးလေးတွေ တသားတည်းရှိတယ်။ သူတိှု့မှာ ကတိစကား နဲ့မေတ္တာတရားရှိတယ်။
အစ်မကြီးက ညီမလေးတွေကိုချစ်တယ်။ သူတို့အိမ်မှာ ကြက်တူရွေးသုံးကောင်ရှိတယ်။ မျှစ်ချိုးကြတယ်။ မျောက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်တယ်။ ကမ္ဘာမြေရဲ့အရွေ့ကိုကြည့်ကြမယ်။ ကလေးတွေမုန့်ဖိုးအတွက် စာအုပ်အငှား ဆိုင်လေးဖွင့်မယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လေးလေး
စားစားချစ်ဖို့ပဲလိုတယ်။ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ တုန့်ပြန်မှုတွေအတွက် တန်ပြန် သက်ရောက်မှုမရှိလည်းနေပါစေ။ အားလုံးက ပုံပြင်တွေပဲလေ။
မင်းဘ၀ကို မင်းကြိုက်သလိုနေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ငါ့မှာဘာမှ မရှိတော့ဘူး။ အချိန်တိုင်းမှာ ငါမင်းကို ချစ်နေဦးမယ်။ ငါတို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပြောကြမယ်။
ယုံကြည်မှုနဲ့အချစ်က ထပ်တူထပ်မျှရှိတယ်။ ဇူဇူးလေး ဖျားနေတယ။် ကမ္ဘာမြေလည်း အအေးမိနေတယ်။ ငါတို့ ဖလူဇာသောက်ကြမယ်။
ည..ည… အိပ်မပျော်လို့ဖုန်းဆက်ရင်ဘာပြောကြမလဲ။ စိတ်ကိုဘာနဲ့မှ တားဆီးလို့မရနိုင်ဘူး။သူမဟာလူကောင်းတစ်ယောက်လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် သူတော်စင်နတ်သမီးတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ရပါဘူးလို့ မွန်ရိုးကပြောခဲ့ပါတယ်။ အကုသိုလ်တရားတွေကို အကြိမ်ကြိမ် ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးကြောင်း
သူမ၀န်ခံသွားခဲ့ပါတယ်။ နတ်ဆိုးကဝေမဟုတ်တဲ့သူမကစွဲမက်ဖွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမမှာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမြောက်
များစွာရှိပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်သည်တစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ တကယ်တော့.. သူမဟာ အပြောကျယ်လှတဲ့ ကမ္ဘမြေကြီးပေါ်မှာ တစ်စုံတစ်ခုကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးဖို့ လိုက်ရှာနေတဲ့ မိန်းမငယ်လေးတစ်ဦးမျှသာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မျှော်လင့်ချက်ဟာ မနက်ဖြန်မှာမရှိဘူး။ ဒီနေ့လည်းမရှိဘူး။ မနေ့ကမှာရှိခဲ့တယ်။ မွန်ရိုးက အထီးကျန်ခြင်းကြောင့်သေဆုံးရတယ်။
သူမ လည်း အထီးကျန်နေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ရေတံခွန်တစ်ခုဆီ ရောက်ခဲ့တယ်။ သဘာဝတရားရဲ့ချစ်ခြင်းကလုံခြုံတယ်။
အသွေးအသားထဲထိ စီးဆင်းတတ်ကြရမယ်။ တစ်စုံတစ်ခုကို ခဏမေ့နေလိုက်။ ဆူးဆိုတာ နက်နက်နဲနဲဆူးမှာပဲ။ အဝေးကို
ငေးကြည့် လိုက်။ အရှုံးဆိုတာ ခံယူသူနဲ့ပဲဆိုင်တဲ့ကိစ္စ။ မိုးတွင်းဆိုရေတံခွန်က ရေလျှံမယ်။ နာကျင်စရာများကို မေ့ထားပစ်ဖို့ လိုတယ်။
မနက်ဖြန် ကို ရေစီးသံတွေနဲ့ စောင့်ဆိုင်းကြမယ်။ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာရှိတယ်။ အမေ့ကို လွမ်းတယ်။ သမီးတွေကိုလွမ်းတယ်။
အဖေကြီးက ပင်လယ်ကိုဖြတ်ရဦးမယ်။ သတင်းစကားတွေသယ်ယူလာဦးမယ်။ ကမ္ဘာမြေရဲ့တစ်နေရာရာမှာ သိပ်ဆင်းရဲနေသူတွေရှိတယ်။
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်ကို ငါတို့ ထိန်းသိမ်းကြရမယ်။ ဘ၀ဟာ ဇာတ်ညွှန်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုတွေဟာ ဇာတ်ညွှန်းခနည်းနည်းပဲရသေးတယ်။ သတင်းထောက်တွေလည်း စာမူခနည်းနည်းပဲရသေးတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ အတူတူကြိုးစားကြရမယ်။
အစ်မကိုပြန်ပို့ပေးရမယ်။ မြစ်ဆိပ်ကမ်းနားက လေတွေအရမ်းတိုက်တယ်။ အဲဒီနေ့ကမိုးမရွာဘူး။ မိုးလေ၀သကြေငြာချက်လည်းမရှိဘူး။
သူမသိပ်ကြောက်နေတယ်။ ကမ္ဘာမြေမှာ မိခင်တိုင်းအတွက် သောကမုန်တိုင်းတွေရှိတယ်။ ၀ိုင်အနီတွေရှိတယ်။ အချိန်တိုင်းမှာ ဖြစ်
တည်ခြင်းရှိတယ်။ ကိုယ်ပြုတဲ့ကံကိုယ်ပြန်ရတတ်တယ်။ သေခြင်းတရားက အားလုံးနဲ့ အတူတကွပဲရှိပါတယ်။
မြို့မငြိမ်းက ဖိနပ်တွေကို ညီညီညာညာ ချွတ်သွားခဲ့တယ်။ သတင်းစာဆရာတွေက ကဗျာဆန်ခွင့်ရှိတယ်။
မွန်ရိုးဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ် မှာ တစ်စုံတစ်ခုကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးဖို့ လိုက်လံရှာဖွေသွားခဲ့တဲ့ မိန်းမငယ်လေးတစ်ဦးမျှသာဖြစ်ပါတယ်။
← မြန်မာ အစိုးရ ၀ါကာ အူဒင် ကို တရားစွဲဆို မည်
အိုဘားမား က မစ်ရွမ်နီ ထက် လူကြိုက်များ နေဆဲ →